Madaxweyne Farmaajo loogu soo dhoweeyay Doxa, Diyaaraddii qaaska aheyd ee Amiirka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa galabta ka degay magaalada Doxa ee dalka Qatar, halkaasoo si diiran loogu soo dhoweeyay.
Madaxweyne Farmaajo oo saaka Muqdisho ka qaaday diyaarad qaas ah oo uu u soo diray Amiirka Qatar ayaa waxaa soo dhoweeyay Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Qatar iyo Safiirka Soomaaliya u fadhiya Doxa.
Waxaa la filayaa in maalinta berri oo Arbaco ah uu kulan dhex maro Madaxweyne Farmaajo iyo Amiirka Qatar, iyagoo ka wada hadli doona xiriirka labada dal.
Qatar ayaa ah taageeraha ugu weyn ee dowladda Madaxweyne Farmaajo, iyadoo horay dhaqaale fara badan ugu deeqday xilligii doorashadiisa iyo labadii sano ee uu talada dalka hayay.
Safarka Madaxweyne Farmaajo ee Qatar ayaa yimid wax ka yar 20 saacadood oo uu ku sugnaa Muqdisho, kaddib markii uu shalay gelinkii dambe ka soo laabtay magaalada Sharma Sheekh ee dalka Masar.
Doodo kala duwan ayaa hareeyay safarka Madaxweyne Farmaajo oo bishan kaliya shan jeer safar galay, waxaana dad badan dib u xusuusteen khudbadiiisa ololaha doorashada, ee ahaa inuu yareynayo safarada dibadda, isagoo ku dhaliilay Madaxdii ka horeysay, balse haatan waxaa muuqata in Madaxweynuhu ogaaday in safarada ay muhiim yihiin.